सामाजिक संजाल मार्फत खुल्यो ‘छक्का पन्जा २’मा बर्षा राउतको लुक्स
पछिल्लो समय सिने नगरीमा बर्षा राउतको नाम चर्चित छ । चलचित्र ‘नाई न भन्नु ल ४’बाट डेव्यु गरेकी बर्षाले पहिलो चलचित्रबाट नै एक प्रकारको हाइप पाइन । म्युजिक भिडियोमा जम्दै आएकी बर्षालाई चलचित्रले अझ माथि उठायो ।
सिनेपाटी 2074, असार 15, विहिबार |
रेखा र अनमोलबीचको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
बर्षको बहुप्रतिक्षित भनिएको चलचित्र ‘कृ’को प्रदर्शन मिति सारिएको छ । यस अघि भदौ ८ गते आउने भनिएको ‘कृ’ अब कात्तिक ३ गते प्रदर्शन हुने भएको छ । युवास्टार अनमोल केसीको मुख्य भूमिका रहेको ‘कृ’ यतिबेला धमाधम छायाँकन भइरहेको छ ।
'हर्के राजा' बन्दै विराज, के फर्किएला पुरानो क्रेज ?
एक समय यस्तो थियो जुन बेला बिराज भट्ट भन्ने बित्तिकै मनमस्तिकमा एक्सन आइहाल्थो । करिब पाँच बर्ष अघि सम्म बिराज अभिनित प्राय चलचित्रहरु हिट हुने गर्दथे । तर बिचमा उनि नेपाली सिने नगरीबाट टाढा भए ।